असोज १८, २०७४ काठमाडौं १७ असोज– यसअघि एक अर्काको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी तालमेल हुँदै पार्टी एकीकरणको कुराले राष्ट्रिय राजनीतिमा हलचल पैदा गरेको छ ।
विगतमा माओवादीले एमालेलाई नाम मात्रको कम्युनिष्ट पार्टी भन्ने गरेको थियो भने एमालेले माओवादीलाई उग्र वामपन्थीको आरोप लगाउने गरेको थियो । यी दुइ पार्टीका नेताहरुबीच बेलाबखत वाकयुद्ध चल्ने गर्दथ्र्यो ।
विगतका तितो बिर्षदै मूलधारका दुई कम्युनिष्ट पार्टीहरुबीच चुनावी तालमेल र एकीकरणको कुराले यतिवेला राष्ट्रिय राजनीतिलाई तरंगीत मात्र गराएको छैन, राजनीतिक समीकरणमा समेत फेरबदल ल्याउने संकेत देखिएको छ ।
नयाँ गठबन्धन बनेसंगै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार नैतिक संकटमा परेको छ ।
दुई कित्ताका वामपन्थी पार्टीहरुबीच एकीकरण गर्ने सहमति कसरी सम्भव भयो त ? नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य रवीन्द्र अधिकारी राजनीतिक स्थिरता र विकास वामपन्थी गठबन्धनको मुख्य उदेश्य रहेको दावी गर्छन् । दुई पार्टी एकताको सुत्राधार वामदेव मानिएका छन् ।
‘अहिलेको राजनीतिक प्रणाली र अस्थिर राजनीति मुलुकको विकास र समृद्धिको बाधक बन्यो । राजनीतिक स्थिरताका लागि धु्रबीकरण जरुरी थियो’ अधिकारीले मंगलवार लोकान्तरसंग भने, ‘नयाँ गठबन्धनले स्थिर सरकारसंगै समृद्धि र विकास दिनेछ ।’
संविधानमा गरिएको निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै पार्टीले बहुमल ल्याउन नसक्ने र फेरिपनि संसदीय विकृति बढ्ने खतरालाई नयाँ गठबन्धनले अन्त्य गर्ने उनको दावी छ ।
प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख मिलन विन्दु ?
माओवादी–एमालेबीच आगामी निर्वाचनमा दुइतिहाइ बहुमत ल्याएर संविधानमा प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यबस्था गर्ने बिषयमा समेत भद्र सहमति भएको स्रोतको दावी छ । तर एमाले केन्द्रीय सदस्य अधिकारी भने अहिले नै त्यो विन्दुमा नपुगेको बताउछन् ।
‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको बिषयमा पनि कुनै दिन सहमतिमा पुग्न सकिएला, अहिले संविधान कार्यान्वयन नै गठबन्धनको उदेश्य हो’ अधिकारीले भने ।
माओवादीले पहिलो संविधान सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको एजेण्डा बोकेर चुनावमा गएको थियो । पहिलो संविधान सभाको कार्यकालमा नेकपा एमालेले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको वकालत गरेको थियो ।
दुई पार्टीबीच सहकार्य र एकीकरण गराउनुमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको एजेण्डा एउटा कारण रहेको दुवै पार्टीका नेताहरु स्वीकार्छन ।
माओवादीको खस्किदो जनमत !
स्थानीय तहको चुनावमा तेस्रो दल बनेको माओवादी केन्द्र प्रदेश र संसदको चुनावमा एक्लै लड्न हिच्कचाइरहेको थियो । गत संविधानसभा चुनावमा प्रत्यक्ष तर्फ २६ सिट जितेको माओवादीले यसपटक चुनावको माहौल सृजनागर्न सकेको थिएन् ।
माओवादीका सामु कांग्रेस या एमालेसंग चुनावी गठबन्धन गर्नु बाध्यता जस्तो थियो । स्थानीय तहको चुनावमा कांग्रेसंग चुनावी तालमेल गरेपनि अपेक्षित नजिता आएको थिएन ।
कांग्रेसको संस्थापन पक्ष चुनावी तालमेलमा सकारात्मक भएपनि रामचन्द्र पौडेल समूहले सहयोग नगर्ने माओवादीको निश्कर्ष रह्यो । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चितवनबाट चुनाव लड्ने घोषणा गरेको भोलिपल्टै कांग्रेसका जिल्ला नेताले पटक पटक माओवादीलाई भोट नहाल्ने प्रतिक्रिया दिए । यस्ता नअ‍ेकन कारणले माओवादी एमालेसंग तामेलका लागि राजी भयो ।
यद्यपी एमाले माओवादी एकताको खास कारण बाहिर आउन सकेको छैन् ।
असोज १८, २०७४ मा प्रकाशित